Feno zava-kanto i Europe, tantara, sy ny kolontsaina. Tsy misy mahagaga àry fa an-trano koa ny masoandro mody tsara indrindra. miaraka Save A Train, ny fiaran-dalamby mitaingina dia rehetra mikasika ny dia, Tsy foana ny toerana itodiana. Noho izany, mipetraka indray dia miala sasatra sy ho vonona. Izany dia handeha ho tsary andro firavoravoana ny tsara indrindra mitaingina lamasinina any Eoropa.
Aiza no tsy hisambotra topimaso tsara tarehy avy amin'ny varavarankelin'ny lamasinina, rehefa nitsidika Kroasia. Kroasia is well known for its amazing and breathless masoandro mody, ka ho azo antoka anao manana ny fakan-tsary vonona araka ianao maintsy hahita ny tsara indrindra mitaingina lamasinina Eoropa nandritra ny masoandro mody Eto.
When you think of Alemaina, tsy mihevitra izany manana ny tsara indrindra mitaingina lamasinina Eoropa nandritra ny masoandro mody, fa ianareo kosa hatao gaga sady faly amin'ny zavatra tsy maintsy atolotra. Ianao koa mahazo izany fomba fijery isan-andro sy ny saha izy anglisy Munich. Eritrereto cloudless lanitra sy ny tanàna tsara tarehy skyline.
Izany no iray amin'ireo tsara indrindra-foana tsiambaratelo! ary iray amin'ireo tsara indrindra any Eoropa mitaingina lamasinina, Izany dia miorina amin'ny helo-drano eo amin'ny Sardinia morontsiraka andrefana, Italia. S'Archittu ranomasina dia kely ihany no vahaolana ho an'izay any an-mahafantatra! Ny tena amoron-dranomasina tokoa zavatra gaga, fa ho azo antoka ianao raiso ilay rarivato-notoraham-bato walkways tsy nandeha. Hifarana amin'ny inona ianao tena vatosoa amin'ny vohitra: ny vatosokay andohalambo rava tanteraka noho ny zavatra tsy tapaka ao an-dranomasina. Na dia tony ny ranomasina, toy izany matetika ao fahavaratra, na lava volo, mampiavaka ny wintertime, ny filentehan'ny masoandro tao S'Archittu foana ny antony haka aina sy maka fotoana mibanjina.
Ataovy azo antoka fa ny mampanahy ihany no manana ny fakan-tsary na fampiharana finday ready in time to take in the beauty that is Europe when the sunsets. Ny boky tsara indrindra any Eoropa mitaingina lamasinina amintsika amin'ny SaveaTrain.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-train-rides-europe-sunset%2F%0A%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#SARDAIGNE #masoandro mody #sunsettravel europetrains Tranride Tuscany